အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး အကြံပေး ခရစ္စတီး ကင်န်နီ နှင့် သံအမတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး အကြံပေး ခရစ္စတီး ကင်န်နီ နှင့် သံအမတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး	Leaveacomment
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး အကြံပေး ခရစ္စတီး ကင်န်နီ နှင့် သံအမတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး	Posted by danyawadi on July 14, 2016 in သတင်းများ	အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ခရစ္စတီး ကင်န်နီ နှင့် သံအမတ်ကြီး မာစီရယ်လ်တို့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည် ထောင် စု နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့ကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမို မြှင့်တင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ကင်န်နီ က သူသည် ဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အမေရိကန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်သွား နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဦးဆောင် လှုပ်ရှားသွားမည့် သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရ သော စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် တိုင်းဒေသ ကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က ကြိုးစားပမ်းစားဆောင်ရွက်နေပါ သည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိပြည်သူများ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လည်း ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ #KKinMM Counselor of the U.S. Department of State Kristie Kenney and Ambassador Marciel met this morning with Yangon Chief Minister Phyo Min Thein to discuss ways the United States can further strengthen ties with the regional government. Counselor Kenney said she would continue to be an advocate for increased U.S. investment in Myanmar, which could create more jobs in local communities. The Chief Minister is doing some great work addressing the challenges facing Yangon, and the United States will continue to support the Myanmar government’s goal to promote greater economic opportunities for people in Yangon and throughout the country.
← မ.ဘ.သ အဖွဲ့ ဆက်လက် လှုပ်ရှားလျှင် သံဃာ အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေအရ အရေးယူ မည်ဟု မဟန မိန့်ကြား	အသက် ၁၉ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားခဲ့တဲ့ မာလာလာ →